RASMI: Cristiano Ronaldo oo la guddoonsiiyey abaal-marinta xiddiga ugu fiican Serie A markii uu xalay seegay xafladda Ballon d’Or – Gool FM
(Milan) 03 Dis 2019. Weeraryahanka Kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa abaal-marinta laacibka ugu fiicanaa horyaal Serie A kal ciyaareedkii 2018-19 ku guddoomay xafladda abaal-marinnada lagu bixinayey ee xalay lagu qabtay Magaalada Milan.
Xiddiga xulka qaranka Portugal ayaa dhaliyey 26 gool xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey Talyaaniga waxaana uu kooxdiisa Juventus ka caawiyey inay ku guulaystaan koob kale oo gudaha ah.
Dhinaca Horyaalka waxa uu dhaliyey 21 gool 31 kulan oo uu saftay, waxaana uu kaalinta afaraad kaga dhammaystay gooldhaliyeyaasha ugu sarreeyey, iyadoo kabta dahabka ah ee gooldhalinta uu ku guuleystay Weeraryahanka halyeyga ah ee Sampdoria, Fabio Quagliarella.
Xeerbeegti ka kooban ciyaartoy kale oo ka wada tirsan Serie A, tababarayaasha, garsoorayaasha, suxufiyiinta, iyo guddoomiyeyaasha farsamada hadda iyo guddoomiyeyaashii hore ayaa dhammaantood isku raacay in Ronaldo uu yahay xiddigii ugu fiicnaa horyaalka xilli ciyaareedkii hore.
Horyaalka Talyaaniga ayaa ah markii saddexaad ee Ronaldouu horyaalo kala duwan ku guuleysto, isagoo sidoo kale La Liga kula guuleystay Real Madrid iyo halka Premier League uu la qaaday Manchester United.
Juventus ayaa dooneysa inay ku guuleysato horyaalka markale xilli ciyaareedkan laakiin weli sidii la qorsheeyay uma socdaan , si kastaba ha noqotee Kooxda Inter ayaa haatan hal dhibic ka sarreyso marka la eego kala horreynta horyaalka Serie A.
Ronaldo ayaa dhaliyey lix gool 11-kiisa kulan ee uu ka soo muuqday horyaalka Serie A illaa iyo haatan kal ciyaareedkan, waxaana la rajeynayaa inuu kooxdiisa ku dhiiri geliyo horyaal kale, isla markaana ay macquul tahay inay ku guuleystaan Tartanka Champions League.
Marka laga soo tago kooxda Juventus, Ronaldo ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku soo qaatay Xulkiisa qaranka Portugal, isagoo kula guuleystay koobkiisii labaad ee heer caalami markii uu qaranka la qaaday koobka Nations League, dhowaanna wuxuu u dhaqaaqay 99 gool oo uu u dhaliyay dalkiisa.
Kaliya hal ciyaarayahan – Ali Daei oo reer Iran ah ayaa abid dhaliyey goolasha ugu badan ee xul loo dhaliyo Ronaldo ayaana rikoorkaas inuu gaaro indhaha ku haya.
Weeraryahanka kooxda Juventus ayaa ka maqnaa xalay xafladdii lagu bixinayey abaal-marinta Ballon d’Or, waxaana uu kaga dhammaystay codeyntii la bixiyey kaalinta saddexaad isagoo ka dambeeyey Virgil van Dijk oo kaalinta labaad galay iyo Lionel Messi oo kaalinta koowaad galay kuna guuleystay.
Ronaldo ayaa min shan Ballon d’Or la lahaa Lionel Messi kaddib markii uu ku guuleystay abaal-marintiisii shanaad sanadkii 2017, laakiin xiddiga reer Argentina ayaa dhigay rikoor cusub xalay, isagoo ka sii horreeya kuna guuleystay abaal-marintan markiisii lixaad.